Azerbaijan: Bilaogera roa voasazy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Janoary 2019 17:06 GMT
Araka ny efa natahoran'ny ankamaroan'ny mpanohana azy ireo, dia efa nanameloka an'i Adnan Hajizade sy Emin Milli sahady ny fitsarana iray any Baku, Azerbaijan ary ny andro nanaovana ny adihevitra momba ny raharaha hanenjehana ireo tanora mpikatroka roa amin'ny fibilaogina lahatsary.
Flying Carpets and Broken Pipelines nandinika ny didim-pitsarana ihany koa ary nilaza fa “tsy farany izao, fa vao fiandohana ihany.”
Mandritra izany, dia namoaka fanambarana vonjimaika ny World Blogging Forum voalohany ao Bucharest, Romania.
Ho avoaka eny ihany ny vaovao farany. Mandritra izany, azo jerena ao amin'ny sehatra Azerbaijan ao amin'ny Global Voices sy ao amin'ny OL! Bilaogy (amin'ny teny Anglisy sy Azeri) ny fitantarana feno momba ny fisamborana, fitsarana ary fanagadrana an'i Adnan Hajizade sy Emin Milli. Ampiasaina ao amin'ny Twitter ihany koa ny tenirohy #EminAdnan.
Fahalalahàna miteny 06 Jona 2022
Fahalalahàna miteny 02 Jona 2022